ForexMT4Systems - Download Free Forex Mazano uye MT4 Zviratidzo
Download Free Forex Mazano uye MT4 Zviratidzo
Bollinger Bands Forex Mazano
Mabhanhireti Mazano Ekufananidzira
Chati Mienzaniso Pamberi Dzemazano
Kutsigira & Kushora Forex Strategies
Swing Trading Trading Forex Strategies
Mutevedzeri Unotevera Forex Strategies
Kuzvipira Kwema Forex Strategies
Forex MT4 Systems Inokugamuchira Iwe Ku 2018!
Chii chinonzi Forex Trading Strategy?
A forex trading strategy iyo nzira inoshandiswa nevatengesi vepamberi kuti vaone kana vachizotenga kana kutengesa mari yemari pane chero nguva ipi zvayo. Nzira dzekutsvaga kwekufambisa zvingave dzichivakirwa pakuongorora kwekambani, chati yekuongorora kana nheyo, nhau-based events. Mutengesi wemari yekutengesa mari inowanzogadzirwa nekutengeserana kunotungamirira kutenga kana kutengesa zvisarudzo. Izvi zvinoreva kuti dzinogona kugadzirwa nemutengesi kana mutengesi, nokuda kwemari yakasara. A forex urongwa hunogona kuuya nenzira yebhuku kana maitiro ekutengeserana.
Sangano rekutengesa mabhuku rinosanganisira mutengesi ane mutemo wakagara wakagadziriswa kana chimiro chaanotarisirwa kuti atore maererano nemutengo / chiratidziro, apo agere pamberi pekombiyuta yake kuti akamirire kuti nzira dzakadaro dzikure. Vatengesi vakawanda vanoshandisa techninal indicators kukudziridza zvinyorwa zvadzo. Mutengesi anodikanwa kuti ave neanzwisisiro kubva pomuenzaniso kuburikidza nekududzira kana chiri kutenga kana kutengesa kurinda. Automated Strategy Nzira yakagadziriswa, kune rumwe rutivi, isargorithm nemitemo yakagadziriswa kana mamiriro ezvinhu, ayo anowanzogadzirwa kuva software, inonyatsozivikanwa se forex robot (EA). Yakawanda maitiro ezvigadzirwa zvakagadzirwa kuMetatrader 4 (MT4) yekutengeserana. Iko inogona kubudiswa pane dzako, uye iko kutengesa panzvimbo yako - zvakakosha zvakakwana kuti utange kutenga kana kutengesa maira kune mutengesi. Muzviitiko zvakawanda, kushandiswa kwekutengesa kunonzi kubvisa rutivi rwevanhu rwepfungwa dzinoita kuti hurumende isinganyatsogadziriswi muvatengesi vakawanda.
Paunosarudza kuti ndeupi rudzi rwekushandiswa kwekushandiswa kwepamberi yekushandisa, une zvingasarudzwa zviviri:
Iwe unobhadhara ivo
Iwe unogona kushandisa chero ipi zvayo yemahara Forex trading trading strategies pane ino yepaiti uye unoidza ivo kunze.
Dambudziko rakabhadharwa Forex bhizimusi zvirongwa ndezvi:
Iwe unogona kupedza mari yakawanda pakutenga Forex trading sarudzo iyo haina kukodzera yako yekutengesa tsika.
Gare gare pasi mutsetse unoona kuti hauna kukodzera unhu hwako hwekutengesa kuitira kuti iwe urege kuzoshandisa kana iwe kufarira kwako kutanga kunotanga kupera. Kudya kwemari.
Nesimba risina mazano ekutengeserana:
Iwe une mukana wekuedza kwavari kunze kwekubhadhara ivo uye pakupedzisira kuwana nzira yekutengeserana inokugadzirira iwe.
Free Forex trading mazano anogona kuita mari mu Forex.
Nezvozvi mupfungwa, iyi webhusaiti ye Forex ine mazana e Mazano ekutengeserana ekufambisa nokuda kwemarudzi ose evatengesi kubva kuvatangi kuenda kuvatengesi vakakurumbira.
Forex Scalping Sarudzo yakagadzirirwa kushanda panguva yakaderera yakareba iyo kureva 1-Minute uye 5-Minute nguva, ndiyo forex scalping business strategy. Iko rudzi rwe Forex trading strategy rakagadzirirwa kuongorora misika yemari shoma pamabhizimisi ose akapinda, somuenzaniso 5 pips, 10 pips kana zvichida 15 pips inobatsira. Icho chinangwa ichi ndechekuti inodzokorora mabasa akadaro pamusangano wekutengeserana, nokudaro ichipa ruzivo rwakakura paunowedzera. Heino mutsara we forex scalping systems panzvimbo ino:
Chii Chinonzi Forex Scalping?
Forex scalping inzira yekutengesa zuva apo Forex mutengesi anoita shanduro uye anobuda mumaminitsi kana mashure pane dzimwe mamiriro. Saka zvinonyanya kukosha, apo iwe unonzi forex scalp mutengesi, iwe hausi kutsvaga mari yakawanda inowanikwa, iwe uri kutsvaga mari shoma shoma pamabhizimisi akaita se 5 pips, 1o pips kana kunyange 15 pips. Uye iwe uri kuedza kutora mishonga yakawanda munguva yose yekutengeserana nematambudziko maduku. Saka ndechipi 'pfungwa yeExxx yekukanda ipapo? Zvakanaka, pano 'chinhu: chinangwa cheFX scalper ndechokuita mishonga yakawanda munguva yekutengeserana uye tarisira kuti pakuguma, zvese zviduku zvishoma zvinowedzera uye zvopfuura kupfuura kurasikirwa kwekutengeserana kwakaitwa (uye kutarisira kuparadzira mari kutengeserana). Vakawanda vanotengesa Forex havafariri Forex scalping nokuti havaoni nharo yekuenda kune zvishoma zvishoma uye kubatanidzwa nemhando iyi yepamusoro yekutengeserana kwemamiriro ezvinhu. Asi chinhu chinonakidza ndechokuti hareredzi vatengesi vakawanda vanoita se Forex scalping. Kana iwe uchida, webhusaiti ye forex ino inewo forex scalping mazano iwe unogona kuaongorora uye edza kana uchida nekukanda pano.
Forex Currency Nhamba Kutengesa Mazano
Kutengeswa kwemashoko kunogona kuva kunobatsira uye kune ngozi zvikuru. Kana iwe usingazivi zvokuita, usatengesa nyaya. Iwe unogona kuvhara kambani yako yekutengesa mumaminitsi mashomanana kusvika kumaminiti nokuti mutengo unogona kukurwisa iwe nokukurumidza iwe uchabatwa kunze. Asi kana iwe usingashandisi nzira dzokutengeserana dzeExx uye mazuva ano, zvakanakisisa kuti uongorore zuva rega rega usati waita zvekutengeserana izvo zvinoshandiswa zvemashoko makuru ezvehupfumi zvakarongwa kuti zvive kunze uye sarudza kana iwe wakamirira kusvikira nyaya ibudiswa ipapo uchitengeserana kana kungomirira chete kune rimwe zuva.
(Basic) Nyore Zuva Rokutengeserana Nzira dzeVatangi
Kana iwe uri wekutanga, kuva nehutano uye huri mberi Forex yebhizimisi urongwa huchavhiringidza hutungamiri hwako. Tora nguva yako! Izvo zvaunoda ndeyokutanga neyo mazano eSexx ekutengeserana uye kushanda yako kubva kumusoro uko. Izvi zviri nyore chaizvo nzira dzekutengeserana kwepamberi. Kuva a zvakakosha Forex trading strategy hazvirevi kuti ivo vachava maitiro ekutengeserana asingabatsiri. Zviri nyore pano zvinoreva kuti mitemo yekutengesa yeyi nzira dzekutengesa Forex zviri nyore chaizvo kunzwisisa nekuita apo iwe uri kutengesa. Hamuri mamiriro mazhinji emitemo kana mitemo yekukuvhiringidza iwe. Ndicho chikonzero nei izvi zvakakodzera mazano ekutengeserana kwevatangi vekutanga. Izvi zviri chaizvo zviri nyore forex zvokutengeserana zvirongwa zvakakodzera kune vatangatanga avo vari kutanga kutengesa forex. Kuva nyore hazvirevi kuti nzira idzi dzekufananidzira hazvibatsiri. Sezvakangoitika, zviri nyore kuti forex mabhizimisi zvirongwa zviri nyore kushandisa uye zvinogona kuva zvakakosha zvikuru. Kana ukangowana zororo, iwe unogona kutanga kukura dzako forex dzenzira dzokutengeserana kana kuenda kune dzimwe nzira mberi forex dzekutengesa maitiro uye kunyange mutengo wekuita forex maitiro ekutengesa. Kana iwe uri wekutanga mutengesi forex, iwe haufaniri kuzvivhiringidza zvikuru nezvimwe zvinhu zvose ... tangowana tsanangudzo ye forex yekutengesa uye demo inoshandiswa iyo kwekanguva. Zvamuchawana ndezvokuti nyore nyore forex mabhizimisi maitiro ndiyo iyo inogona kuita mari. Tsvaga, rambira pairi uye edza kuita kuti ikushandirire iwe nekuomerera kumitemo yayo yekutengeserana nekutengeserana kwekutengesa ngozi. Price Action Price action trading is simply technical analysis trading using the action of candlesticks, chart patterns, support and resistance levels to execute orders. Kuti uve mutengo wekutengeserana mutengo, unofanirwa kuva nekunzwisisa kwakasimba kwekuti mutengo wekuita nheyo uye kuti ungaitengesa sei munguva chaiyo. Heino mutsara we forex price action action panzvimbo ino:
Forex Mutengo Chikoro Chekutsvaga Kwemaodzanyemba
Forex Mutengo Wekutevedzera Kutsigira Kurwisana Kwekutsvaga Strategic
Forex Easy Easy Action Trading Trading Strategy
Forex EMAS Mutengo Action Scalping Strategy
Mutengo Wekufananidzira Mutengo Action Scalping Strategy
Forex Price Action Channel Channel Scalping
Forex Fractal Price Action PPR Chiratidzo
Zvinonyanya Kukosha Zvikamu Zvokutengeserana Kwema Forex Strategy
Chii chinonzi Forex trading strategy (system)? A forex trading strategy inongova mitemo yemitemo inokuudza nguva yekutenga kana kutengesa apo mamwe marongerwo emamiriro ezvinhu anosangana kuitira kuti awane purofiti. Chero chero chipiro chekutanga chekutengeserana chinofanira kuva nechokutanga che 4 asi zvinhu zvinokosha:
mamiriro (or) ayo anofanira kukuita kuti utenge kana kutengesa.
kupi kunogona kuisa kurasikirwa kwako kwemaimira,
kwatinofanira kuisa kutora purogiramu
uye iyo inofanirwa kuva nemitemo pamusoro pekugadzirisa basa.
Ndiyo tsanangudzo yekuti chii chinonzi forex trading strategy. Kana iyo yekutengeswa yekushambadzira isina imwe yezvinhu izvi zvepfungwa, iwe uri kuenda kusara uchinetseka mukugadzirisa. Kuisa pachena, misika inonzi forex inogona kutaurwa kuti yakashata. Saka kuti uve nehutano mumusika wakashata, unofanira kuva nemitemo.
Panewo zvakawanda zvakawanda Forex nzira mazano mune iyi website Forex iyo inosanganisira:
Kutengeserana Kwekufananidzira Nzira dzinoshanda
Zvose zvinotengesa vatengesi zvakasiyana ... zvaunoda hazvisi izvo zvandinoda. Zvaunofunga kuti ndiyo yakanakisisa Forex yokutengesa hurongwa kwandiri handizove yakafanana. Mubvunzo uyu wakasara kune mumwe nomumwe Forex mutengesi. Iwe unoda kuwana Forex yebhizimisi urongwa hunoenderana neunhu hwako hwekutengeserana uye kana iwe uchiita ... ipapo iyo ingadai iri yako yakanakisisa forex trading strategy (mune maonero angu). Saka, kana uri kutsvaga Nzira dzekutsvaga yekutengesa dzinoshanda, kungonzwisisa kuti imwe yehurongwa haigone kushanda kune vose. Ndinogona kuda mutengo wekutengesa asi iwe unogona kushandisa zviratidzo mukutengesa kwako. Iwe unofanirwa kutsvakurudza nekuedza uye uone kuti ndeapi maitiro e forex machirongwa uye maitiro anoshanda iwe nekuda kwekuti muviri wose wakasiyana. Kana iwe uchida kufambisa mashandisirwo emakambani ekutengeserana mazano, kune zvakawanda zvavo pane ino. Kana iwe uchida scalping Forex trading strategies, ivo vari pano. Kana iwe uchida nzira dzebhizimisi dzekutengesa, dziri pano. Kana iwe uchida maitiro ekutengesa zuva uye zvirongwa, pane pano. Kana iwe uchida kushambadzira maitiro ekutengesa nehurongwa, mazhinji emagadziro apa ari kutengesa maitiro ekutengesa. Zvose zvaunoda kuita ndezvipi zvaunoda uye uite iyo Forex trading strategy inoshanda iwe. Kana kana iwe usingagoni kuwana Forex system yaunoda asi kune imwe yaunofanana nayo "asi yakadaro haikwanisi ... saka sei usingaiti twechi? Sei uchida kuchinja kuburikidza nekubatanidza maitiro mashomanana ekutengeserana kana pfungwa kubva "yekutengeswa kwehurongwa" uye "iyo yekutengesa hurongwa" uye wobva waita urongwa hwekutengesa iwe hugutsikana nawo? Hapana achakumisa. Iye zvino, rega tiudze kuti mushure mekunge mawana hurongwa hwako hweExx iwe unofarira ... chii chaunotevera? Zvakanaka, shandisa demo rebhizimisi rekutengeserana ne Forex broker uye kuedza kunze kwehurongwa kuti uone kuti inoshanda sei mumamiriro ezvinhu chaiwo emisika. Iyo ndiyo nzira chete yaunoziva nayo iyo forex trading trading system inoshanda. Zvose nzira dzekutengesa uye zvirongwa zvinogona kutarisa zvakanaka panzvimbo ino asi kana uchida pane zvekutengeserana, iwe unoda chaizvo kuidziidza. Zvino kana wave wakagutsikana, iwe unogona kutanga kutengesa nemari chaiye. Ikoko ndiko kunofadza kunotanga ... kutengesa nemari inorarama. Ndedzipi matanho mazhinji Forex dzokutengesa unoda? Kana ukasarudza kutengesa rudzi rumwe chete rwekutengeserana kwekugadzira ipapo iwe unongoda chete pane forex trading system. Asi kana iwe uchida kutengesa mamiriro akasiyana emusika saka uine huwandu hwakaoma forex dzekutengeserana maitiro kune imwe neimwe yemamiriro akasiyana emusika inokosha. Muenzaniso wokufananidzira:
kana mumusika uri munzira, iwe unenge uchishandisa nzira yekutengeserana
kana mutengesi uri mukubatanidza kana mune imwe nzvimbo, iwe unofanirwa kushandisa shanduro yekutengeserana
kana mutengesi uri kuwana kukutsigirwa kukuru kana kumira, iwe unogona kushanduka kushandisa shanduro nekudzivirira kushambadzira.
Saka zvakanyanya kusvika kune mutengesi forex kuti asarudze. Kana iwe uri wekutanga vanotengesa forex, ndinokurudzira iwe kungotora kamwe chete forex motengesi uye unamatire pairi.
Swing Trading Nekushanda Kwezuva?
Zvose zvevatengesi forex dzakasiyana. Vamwe vanofarira kutengesa nguva shoma uye vachichengetedza vatengesi vavo kuti vasunungurwe kwenguva shomanana zvinoreva kushandiswa kwemazuva zuva shanduko inoitwa pano. Asi ipapo kune vatengesi vekare vatengesi vari kutengesa ... Vatengesi vekutengesa ndivo vatengesi ivavo vanoita basa uye vane chinyararire chikuru kusvika kwenguva refu. Izvi zvinoreva kushandiswa kunogona kuvhurwa uye zvinogona kutora zuva rimwechete kwevhiki kana kunyange mwedzi isati yatengeswa. Vatengesi vekutsvaga vanoda kuda kumirira kutengesa kutamba ... iyo ingatora nguva yakareba sei zvichienderana nekutengesa mutengo uye kushambadzika kwemashamba zvechokwadi. Kubudirira kwekutsvaga kutengesa naizvozvo ndeyekuti, iyo yose maduku maduku kuchinja kwemazuva mashomanana (iyo ndiyo nzvimbo yevatengesi vemazuva) isingatariswi uye nguva yakareba kwenguva refu inotarirwa maererano nekutengeserana kwega kwega kunoiswa. Izvo zvakanakira kushambadzira kutengesa naizvozvo ndeizvi:
Mashizha akaitwa kwemazuva, vhiki nemwedzi zvinoreva zvakawanda
ruduku rwemitengo shoma is irrelevant
mhizha inowanzopinda panenge ichikwira, iyo inowanzoitika, inowanikwa pangozi yakadzika, yakawanda mubayiro wekutengeserana inowanikwa pfungwa.
Iyo chete inonyanya kukuvadza yekutengesa kwekutengesa iwe pane dzimwe nguva unofanirwa kuchengetedza bhizimusi kunyange mumakumbo aro uye pasi kunongedza kwekutengo sezvo ichikwira kune yako inowanikwa. Zvinobatsira zvekutengesa zuva ndezvi:
Purogiramu kana kurasikirwa zvakawanikwa munguva shoma shoma munguva yemasikati.
dzimwe mikana yakawanda yekutengesa inogona kuwanikwa masikati.
Kuvhiringidza kwekutengesa zuva ndeizvi:
purogiramu shoma pabasa rimwe nerimwe
kunyanya kunetseka uye hutsika hutsika hwekutengeserana uye dzinoda kugara uri wakangwarira kuti uone matanho ako ekutengeserana ekugadzirira.
Scalping iyowo ndiyo nzira shomanana yekutengesa zuva ... zvinotora maminitsi kana masekondi kuti uzarure zvinogona kupedza basa.
Maawa Akanakisisa Okutengesa Forex?
Pfungwa dzinogona kusiyanisa asi chinhu chimwe chine chokwadi ... zviri nyore kwazvo kuita mari kutengesa misika ye forex apo fx yemakethe ine chido uye inokurumidza. Uye saka iyo pazvinosvika pane izvozvi, vazhinji vatengesi vatengesi vanofarira kutengesa misika yepamberi munguva yeLondon Session uye New Your Session. Purogiramu yeLondon forex ndiyo iyo mabhii makuru ekutengeserana kwekufambisa akaitwa zuva rega rega rinoteverwa neChipiri cheSession yako. Munharaunda yeAsia forex yokutengeserana, iyo inowanzozivikanwa nemafuta maduku mukati mezuva. Zvakanakisisa pane zvandinofunga kutengesa forex munguva yeLondon fx maawa kana panguva yeNew Your Forex trading session.
Our Yakarongerwa Forex MT4 Indicator kubva pakutora kwedu:
bollinger bands zviratidzo
zuva rokutengeserana zviratidzo
kushandura mapeji ekuenzanisa
Yakanakisisa Pari Yezvikwata Zvokutengeserana?
Kusarudza imwe mari yekutengeserana inokosha zvikuru. Heino chikonzero nei:
imwe mari yemari miviri haifaniri kufamba zvakanaka
imwe mari yemari pairi chete inofadza zvakanaka pane dzimwe nguva mukati mezuva, somuenzaniso, kuLondon uye itsva yako yekutengesa.
imwe mari yemari miviri yakawanda kwazvo inopararira muwandu hwe3-5 pips nevamwe ve forex brokers uye kana iwe ukatengesa imwe yemvumo yemvumo, iyo inenge madhora $ 10- $ 50 kurasikirwa pakarepo mushure mokunge iwe uchishambadzira uye mutengo unofambisa neizvi zvakawanda mu iyo nzira yekutengeserana kwako kuti uite kuti iyo yebhizimisi ikanganise.
imwe mari yemari pairs ine tsvina yakawanda iyo inoreva kuti vane chimiro chekuputika uye kana kurasikirwa kwako kuswedera pedyo, iwe uchadziviswa kunze
Nei Kushandiswa Kwebhizimisi Kwemagetsi Kunoshanda Zvakanaka MuMatengesi Okutanga
Sei Kufananidzirwa Icho Chiri Nani Kupfuudza Mari Inofanirwa Nemaoko Kana Zvimwe Zvinhu
Ndezvipi Kusiyana Kwekutengesa Mini Lots Vs. Zvose zvakakwana Zero mu Forex
Kunzwisisa A Forex Kutakura Trade
Kutengeserana Kugadziriswa MuMusika Wekufanako
Izvo Zvakanaka uye Zvokuchengetedza, Zvokutengeserana neAkambani Yokufananidza Kutengeserana Kwekufananidzira
Iko Ikoti yeExcx uye Iyo Yakabudirira Yayo
Kutsigirwa Uye Kurwisana MuMugove Wokutanga
Savvy Tactics Kuti Deredza Kuderedza Whopping Forex Kurasikirwa
Inobatsira Forex Nzira Nedzidzo
Kufambira Mberi MuMusika Wokutanga
Mari Inoshandiswa Uye Kutengeserana Kwekufambisa
Leonardo Fibonacci Uye Forex Trading
Girasi Tsvene Yekutengeserana Kwakafanirwa?
The chitsvene chemafuta eExx trading is money management. Dzimwe nguva anonzi Trading Risk Management. Iwe unowana uyu zvakarurama nekurangwa nekuita chinhu chakanaka uye chauchazoona icho icho inongova nyaya yenguva usati watanga kuita mari yakanaka kutengesa forex. Zvinokonzera mamiriyoni e forex trading accounts ndeyeMari Management. Saka hazvirevi here kuti uzvikurire iwe pakuwana izvi zvakarurama? Iwe unoona, hapana chekutanga chekutengesa nzira ichakupa 100% kubudirira kwehuwandu. Hapana. Pane imwe nguva basa riri kuiswa, mhedzisiro yaunoda haisimbiswi nokuti haugoni kutarisa mutengo wemusika uye kwaunofamba kuenda mberi! Iwe uri pakunzwira tsitsi kwemashamba emakambani ekugonesa uye kutengesa zvinodiwa nevatengesi. Asi iwe unogona kutonga ndeyeRISK. Ndiyo chete chinhu chaunenge uchitonga zvachose mubhizimusi ... ngozi yako yekutengesa. Iwe unosarudza kuti yakawanda yekero yako iwe uri kuisa pangozi mune zvebhizimisi.
Iva Anobatsira Forex Mutengesi
Vatengesi vakawanda vanoita uye vanorasikirwa nemari yakawanda yekutengesa Forex. Nemhaka yekuti manzwiro evanhu anobatanidzwa ... makaro uye kutya zvinouya. Apo mari yako chaiyo iri pamutsara, iwe unowanzoita zvinhu zvausingazoiti iwe paunenge uchida kutengesa. Muedzo wokutengesa zvakawanda uye kuita mari yakawanda "ikozvino" ndiyo imwe muurayi mukuru wekambani yekutengeserana mabhuku. Izvo zvose zvinouya pasi pakuraira nekugadzirisa dambudziko rako. Kukundikana kweizvi uye iwe haungagari kwenguva refu mukutengesa forex online.
Unogona kuita mari yekutengesa Forex?
Hongu uye Kwete. Iyi haisi mhinduro inoshamisa. Iwe unogona chaizvo kuita mari. Uyewo iwe unogona kurasikirwa nemari yakawanda. Chakavanzika chekuita mari mukutengeserana kwepamberi ndiko kuchengetedza dambudziko rako rekutengesa nekuwana forex yebhizimisi urongwa hunokwana iwe. Zvese zvimwe hazvina maturo. Kana iwe unogona kudzora manzwiro ako uye kutarisira ngozi yako yekutengesa, iwe uchaita zvakanaka. Hongu, kana iwe uchitarisira ngozi yako yekutengesa uye uine mabhora esimbi ... Chaizvoizvo, iwe unogona kubatsira kana iwe ukabvisa zvinhu izvo zvinoparadza yako forex trading like:
kwete kutevera mitemo ye forex yako yekutengeserana
kwete kutevera urongwa hwekutengeserana kwehuwandu hwehutano hwawaiva nawo.
kwete kumirira kukodzera kwekutengesa zvigadzirwa kuti zviitike usati watora bhizimusi nokuti uri "kukurumidza" kutora basa
Zvayo zvinhu izvi zvichaita kuti iwe usakundikana Forex mutengesi uye iwe unogona kurasikirwa nemari yakawanda kana isingatungamiri. Pane chirevo "Ndakaona muvengi ... uye iyo ini." Izvi ndezvechokwadi mu Forex trading. Iwe ndiwe muvengi wako wakaipa paunouya kuExpx trading. Kana iwe uri mutengesi itsva, iwe uchaona izvi uye ufunga kuti ndinoreva nhema ... Asi tarisira kusvikira watengesa mari chaiyo kwechinguva uye iwe uchaziva zvandareva ndezvechokwadi. Iwe unotengesa mari yakawanda sei pakutengeserana? Kune zvikoro zvakawanda zvekufunga nezvekuda kwekuti munhu angazviisa pangozi pamabhizimisi. Asi yeuka izvi: kana iwe uchiisa pangozi yakawanda yekambani yako mune imwe yebhizimisi, hazvingatore nguva refu usati wabvisa peji yako yekutengeserana forex asi kune rumwe rutivi, unogona kuita mari yakawanda kana basa racho richienda. Asi iwe unotengeserana mberi kwenguva refu, inogadzirisa zvakakwana kuisa pangozi pato duku yekambani yako yekutengesa mubhizimusi rimwe nerimwe. Chikonzero chacho chiri nyore: iyo inogona kutora yakawandisa kurasikirwa nemisungo kuti irove account yako forex trading. Saka chii chakanaka? Ndinogona kutaurira ku1-2% yeakisi yako mubasa rimwe nerimwe. Iwe unogona kutokwira seC5% pangozi yekutengeserana. Asi yeuka, nechinangwa che5% pamabhizimisi, zvose zvaizotora 20 inotevera kurasikirwa nemabasa uye akaunti yako ichadzimwa. Kana iwe unowedzera kuisa pangozi kana iwe uchirasikirwa kana iwe unogona kuita zvakawanda. Iwe unotamba mutambo uyu wekuchengetedza ngozi uye iwe unogona kuita tani yemari yekutengesa forex.
Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Usati Wavhura Aunti Yakafanirwa
Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Usati Waita In Forex
Misika yePisimusi: Kutengeswa kweDzive
Imwe Nzira Yakanaka Yokudzivisa Mazuva Akaipa MuIndaneti Forex Currency Trading
Ita Mari Nekutsvaga Kwekutsvaga Nokushandisa Kushandura
Dzidza Nguva Yokutanga Kutengeserana - Nzira Yokugadzira Imari Nekutsvaga Kwekutengesa Chikamu Nguva Kubva Pamba
Nzira Yokushandisa Kushandiswa Kwezvakanaka Zvikuru Nenguva Yokufananidzira
Nzira Yokuverenga Nheyo Dzekutanga: 5 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva
Nzira Yekutora Sei Zvakanaka Mutengesi Wechirangaridzo
Nzira Yokushandisa Nayo Kurasikirwa Kwemararamiro Ako Pamusoro peExist
Nzira Yokuwana Nayo Inonyanya Kubuda Kwako Forex Currency Trading System
Nzira yekusarudza smart Stop Loss mu Forex Trading
Anotsvaga Nhau Kutengesa Nhiyo Basa?
Kutengeserana Kwekufananidzira, Ndeapi Maawa Ndinofanira Kugadzirira Kutengeserana?
Dhaunirodha Best Free MT4 Indicator
Forex SB Bhuku Rekushandisa Chiratidzo
Forex SB Bhuku Reji ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Chinangwa AO Bhari Chiratidzo
Forex Inobatsira AO Bhari ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Max Range Bhari Chiratidzo
Forex Max Range Bhari ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Yakanyarara Rsi Chiratidzo
Forex Silent Rsi ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Advanced Advanced Indicator
Forex Advanced DC ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Paradox MA Crossover ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Ma Kubvira Kubva Pari Chiratidzo
Forex Ma Kubvira Kubva Pari ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Din Fibo High ... [Verenga Zvakawanda ...]
Best Free Forex Trading Trading
Forex TFX Obos Scalping ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Candle Nguva Yokuvhara Chiratidzo Chinogara
Forex Candle Nguva Yokupfiga ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Nasap Stochastic ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Runyora Rwokutenderera Rongedza v1 Indicator
Forex Runyora Rwesarudzo Rwakasimudza ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex RBCI2 Chirongwa Chekutengesa Mutsara
Forex RBCI2 Trading Trading ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Super DSS Bressert ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex THV Ngirozi dzeScalping Strategy
Forex THV Ngirozi Scalping ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Camarilla Pivots ... [Verenga Zvakawanda ...]
Best Free Forex Mapurogiramu ekuparadzanisa
Forex Pakupedzisira Pips Breakout Trading Strategy
Forex Yokupedzisira Pips Breakout ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Super Day Breakout ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Direction Intraday ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Trend Line Breakout ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Envelopes Breakout ... [Verenga Zvakawanda ...]
Forex Trend Dynamic Breakout ... [Verenga Zvakawanda ...]
advanced indicator adx indicator chiratidzo chekucherechedza museve chakarurama atr indicator bar chiratidzo best mt4 indicator bollinger band indicator atengesa sell indicator konezi kenduru cci indicator chiratidzo chekushandisa cross indicator chimiro chetsika dashboard chiratidzo chiratidzo chekutengesa zuva chirevo chekutungamirira dot indicator fibonacci indicator chikwangwani chinokanganisa free forex indicator free fx indicator free mt4 indicator histogram chakarurama Ichimoku chiratidzo nharaunda yeruzivo chikwangwani chemazinga mutsetse chakarurama macd indicator metatrader 4 chiratidzo chiratidzo chinokurumidza kushandura chiyero chinoratidza mt4 indicator mtf indicator oscillator indicator pivot points point mutengo wematengo kuchinja kwechiratidzo rsi chiratidzo scalping indicator chiratidzo chinoratidza stochastic indicator super indicator chiratidzo chinoratidza chiratidzo chokuratidza